Washington ပြည်နယ် Seattle မြို့က ဆန္ဒပြပွဲ မြင်ကွင်း။ (ဇွန် ၀၃၊ ၂၀၂၀)
George Floyd သေဆုံးမှုအတွက် အဓိက သံသယရှိသူ ရဲအရာရှိအပေါ် တိုးမြှင့်စွဲချက်တင်လိုက်ပြီဖြစ်သလို အခင်းဖြစ်ချိန်က ရှိနေခဲ့တဲ့ နောက်ထပ် ရဲအရာရှိသုံးဦးကိုလည်း တရားစွဲထားပါတယ်။ ဒီအခြေအနေက ဆန္ဒပြပွဲတွေအပေါ်ဘယ်လို သက်ရောက်လာနိုင်ပါသလဲ၊ သမ္မတထရမ့်ပ်က လိုအပ်ရင် စစ်တပ်သုံး နှိမ်နင်းမယ်လို့ ပြောထားတဲ့အပေါ်မှာရော ဘယ်လို သုံးသပ်နိုင်ပါသလဲ စတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ဗွီအိုအေ အယ်ဒီတာ ဦးကျော်ဇံသာကို ဝိုင်းတော်သူ မမြသဇင်အောင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
မမြသဇင်အောင်။ ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ အန်ကယ်။ ဒီမင်နီဆိုတာမှာ လူမည်းအမျိုးသား George Floyd သေဆုံးခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ မနေ့က သံသယရှိတရားခံ ရဲအရာရှိဟောင်းကို တရားရုံးက အရေးယူတဲ့ အဆင့် တိုးမြှင့်လိုက်ပြီးတော့ နောက်ထပ် အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာ ပါဝင်တဲ့ ရဲ သုံး ဦးကိုလည်း ထပ်ပြီးဖမ်းလိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဒါက ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ ဘယ်လို ရိုက်ခတ်မှုတွေရှိနိုင်ပါသလဲ။ အန်ကယ် ဘယ်လို မြင်ပါသလဲ။
ဦးကျော်ဇံသာ။ ။ ဆန္ဒပြသမားတွေ ကျေနပ်သွားပါတယ်။ ဆန္ဒပြပွဲဟာ ယေဘုယျအားဖြင့် ပြောရရင် ပိုပြီးတော့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ဖြစ်သွားတယ်လို့ ပြောရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ တချို့နေရာတွေမှာတော့ ခြွင်းချက်ရှိတာပေါ့လေ။ နယူးယောက်မှာ နည်းနည်းပါးပါး ထိပ်တိုက်တိုးတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ ဆန္ဒပြမှုဟာ ပိုပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းသွားတယ်။ ဒါဟာ ဆန္ဒပြသမားတွေအတွက်က ကျေနပ်မှုအတော်ရသွားတယ်ဆိုတဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကတော့ သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။ သို့ပေမယ့် လူတိုင်းက ကျေနပ်သေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့တကယ်လိုချင်တာကတော့ စနစ်ကို ပြောင်းဖို့ လိုချင်တယ်။ အထူးသဖြင့် တရားရုံးက သူတို့ကို ဘယ်လို အပြစ်ပေးလာမလဲဆိုတာကို သူတို့ စောင့်ကြည့်ချင်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ တချို့ကဆိုရင် ဒီအခု တတိယအဆင့်ကနေ ဒုတိယအဆင့် တိုးမြှင့်လိုက်တာနဲ့ မကျေနပ်ဘဲနဲ့ ပထမအဆင့်နဲ့ သူတို့ကို အရေးယူစေချင်တယ်။ အဲ့လို အယူအဆတွေလည်း အမျိုးမျိုးရှိနေကြတာပေါ့ ဆန္ဒပြသမားတွေထဲမှာ။
မမြသဇင်အောင်။ ။ ဆန္ဒပြပွဲတွေက ဆက်ပြီးတော့ ဖြစ်နေအုံးမယ်ဆိုတဲ့ သဘောလား အန်ကယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ။ ။ ဟုတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် စောစောကပြောတဲ့ ဆန္ဒပြသမားတွေ လိုချင်တာက တရားရုံးက ဘယ်လိုသူတို့ကို ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်လာမလဲ။ အဲဒါ သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ အခုက ပြည်နယ်ရှေ့နေချုပ်ကလည်း မနေ့က ပြောတယ်၊ သူတို့ကတော့ ဒီကိစ္စကို ပိုပြီး စေ့စေ့စပ်စပ်နဲ့ သေသေချာချာလုပ်မယ်၊ အချိန်ယူပြီးတော့ လုပ်ရမှာ ဖြစ်တယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံး မြန်အောင် ကြိုးစားပေမဲ့လည်း လနဲ့ ချီပြီး ကြာနိုင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဆိုတော့ အဲဒီ တရားရုံးရဲ့ အဆုံးအဖြတ် တရားရုံး ဆိုတာ ဂျူရီအဖွဲ့ပေါ့၊ ဒီကတရားဥပဒေ စနစ်အရတော့ တရားရုံးကို တင်မယ်၊ တရားရုံးမှာ ကြားနာ စစ်ဆေးရမယ်။ ပြီးတော့မှ ဂျူရီက သူတို့ကို ပြစ်မှုထင်ရှားတယ်လို့ ယူဆသလားဆိုတာ ဆုံးဖြတ်သလား။ အဲ့ဒါထိ သူတို့စောင့်ကြည့်လိုတဲ့သဘောတော့ အနည်းဆုံး ရှိလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဆန္ဒပြသမားတွေ တချို့ပြောတာက ဒီတစ်မှုထဲတင်မကဘူး၊ နိုင်ငံမှာ ဒါမျိုးတွေ အမြဲတမ်းလိုလို မကြာခဏဖြစ်နေတာ။ အဲ့ဒါကြောင့် စနစ်ကိုပါ သူတို့ ပြင်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ ပြောနေကြတယ်။
မမြသဇင်အောင်။ ။ နောက်တခုက အန်ကယ်။ ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေ နှိမ်နင်းဖို့ လိုအပ်ရင် စစ်တပ်ကိုသုံးမယ်လို့ သမ္မတထရမ့်က ပြောတဲ့အပေါ် ကာကွယ်ရေး အသိုင်းအဝိုင်းက ဝေဖန်နေကြတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ရော အန်ကယ်ဘယ်လို သဘောရပါသလဲရှင့်။
ဦးကျော်ဇံသာ။ ။ အဲဒီကိစ္စမှာ သမ္မတ Donald Trump ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်သလဲဆိုတာထက် သူလုပ်လိုက်တဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ သူ့အပေါ်မှာ ပြန်ပြီးတော့ ဒါ ဆိုးပြစ်တွေပေါ့လေ၊ ကောင်းကျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့အဖြစ်တွေ တန်ပြန်ရိုက်ခတ်လာနိုင်တယ်လို့ပဲ ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ သူ့ဆီမှာ အရင်တုန်းက ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး လုပ်ခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ ၀န်ကြီးဟောင်း Mattis ဟာဆိုလို့ရှိရင် သူပြောတာ တော်တော်လေး တန်ဖိုးရှိတဲ့ စကားပါ။ Donald Trump က စစ်တပ်ကို သုံးပြီးတော့ ဒီဟာတွေကို နှိမ်နင်းဖို့ ပြောလိုက်တာဟာ အမေရိကန်ပြည်သူတွေ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအရ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်ခံလိုက်ရတာ။ အဲဒီ အခွင့်အရေး ကျင့်သုံးတာကို စစ်တပ်က နှိမ်နင်းရမယ်ဆိုတဲ့ သဘော၊ အဲလိုဆိုတော့ ဒါ စစ်တပ်နဲ့ ပြည်သူတွေကို ရန်တိုက်ပေးတဲ့သဘော ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ ထိုးနှက်ပါတယ်။
မမြသဇင်အောင်။ ။ အမေရိကန်မှာ အခုလို လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနဲ့ တခြားခွဲခြားမှုတွေ အပေါ် ဆန္ဒပြကန့်ကွက်နေကြတဲ့ ဂယက်က နိုင်ငံတကာကို ဘယ်လောက် ရိုက်ခတ်မှု ရှိလာနိုင်ပါသလဲ။ ဒီအပေါ်မှာရော အန်ကယ် ဘာပြောချင်ပါသလဲရှင့်။
ဦးကျော်ဇံသာ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ အခုကိုပဲ နိုင်ငံတကာမှာလည်းပဲ အလားတူ ဆန္ဒပြပွဲတွေ ဖြစ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဟိုသမိုင်းထဲက ဆိုရိုးစကားတခု သတိရပါတယ်။ တချိန်တုန်းက ပြင်သစ်မှာ တော်လှန်ရေးဖြစ်ရင် ဥရောပကိုပါ ကူးစက်သွားတော့ When France sneezes, European catchesacold. ပြင်သစ်က ဟတ်ချိုးချေရင် ဥရောပက နှာစေးနေပြီ၊ အအေးမိနေပြီ ပြောကြပါတယ်။ အခု ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေရဲ့ အခြေအနေကလည်း When American sneezes, the World catchesacold. ပြောရလို ဖြစ်နေပါပြီ။ အမေရိကန်က ဖြစ်လိုက်ရင် ကမ္ဘာကို ပျံ့နှံ့သွားတာပဲ။
George Floyd သဆေုံးမှုအတှကျ အဓိက သံသယရှိသူ ရဲအရာရှိအပျေါ တိုးမွှငျ့စှဲခကျြတငျလိုကျပွီဖွဈသလို အခငျးဖွဈခြိနျက ရှိနခေဲ့တဲ့ နောကျထပျ ရဲအရာရှိသုံးဦးကိုလညျး တရားစှဲထားပါတယျ။ ဒီအခွအေနကေ ဆန်ဒပွပှဲတှအေပျေါဘယျလို သကျရောကျလာနိုငျပါသလဲ၊ သမ်မတထရမျ့ပျက လိုအပျရငျ စဈတပျသုံး နှိမျနငျးမယျလို့ ပွောထားတဲ့အပျေါမှာရော ဘယျလို သုံးသပျနိုငျပါသလဲ စတာတှနေဲ့ပတျသကျပွီး ဆန်ဒပွပှဲတှနေဲ့ပတျသကျလို့ မကျြခွမေပွတျ စောငျ့ကွညျ့နတေဲ့ ဗှီအိုအေ အယျဒီတာ ဦးကြျောဇံသာကို ဝိုငျးတျောသူ မမွသဇငျအောငျက ဆကျသှယျမေးမွနျးထားပါတယျ။
မမွသဇငျအောငျ။ ။ ဟုတျကဲ့ပါ အနျကယျ။ ဒီမငျနီဆိုတာမှာ လူမညျးအမြိုးသား George Floyd သဆေုံးခဲ့တဲ့ ဖွဈရပျနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ မနကေ့ သံသယရှိတရားခံ ရဲအရာရှိဟောငျးကို တရားရုံးက အရေးယူတဲ့ အဆငျ့ တိုးမွှငျ့လိုကျပွီးတော့ နောကျထပျ အခငျးဖွဈတဲ့နရောမှာ ပါဝငျတဲ့ ရဲ သုံး ဦးကိုလညျး ထပျပွီးဖမျးလိုကျပါတယျ။ ဒီတော့ ဒါက ဆန်ဒပွပှဲတှမှော ဘယျလို ရိုကျခတျမှုတှရှေိနိုငျပါသလဲ။ အနျကယျ ဘယျလို မွငျပါသလဲ။
ဦးကြျောဇံသာ။ ။ ဆန်ဒပွသမားတှေ ကနြေပျသှားပါတယျ။ ဆန်ဒပွပှဲဟာ ယဘေုယအြားဖွငျ့ ပွောရရငျ ပိုပွီးတော့ ငွိမျးငွိမျးခမျြးခမျြး ဖွဈသှားတယျလို့ ပွောရပါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေဲ့ တခြို့နရောတှမှောတော့ ခွှငျးခကျြရှိတာပေါ့လေ။ နယူးယောကျမှာ နညျးနညျးပါးပါး ထိပျတိုကျတိုးတာတှေ ရှိပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ယဘေုယအြားဖွငျ့တော့ ဆန်ဒပွမှုဟာ ပိုပွီးတော့ ငွိမျးခမျြးသှားတယျ။ ဒါဟာ ဆန်ဒပွသမားတှအေတှကျက ကနြေပျမှုအတျောရသှားတယျဆိုတဲ့ သဘောဖွဈပါတယျ။ သူတို့ကတော့ သတငျးကောငျးဖွဈတယျ။ သို့ပမေယျ့ လူတိုငျးက ကနြေပျသေးတာ မဟုတျပါဘူး။ သူတို့တကယျလိုခငျြတာကတော့ စနဈကို ပွောငျးဖို့ လိုခငျြတယျ။ အထူးသဖွငျ့ တရားရုံးက သူတို့ကို ဘယျလို အပွဈပေးလာမလဲဆိုတာကို သူတို့ စောငျ့ကွညျ့ခငျြတယျ။ နောကျပွီးတော့ တခြို့ကဆိုရငျ ဒီအခု တတိယအဆငျ့ကနေ ဒုတိယအဆငျ့ တိုးမွှငျ့လိုကျတာနဲ့ မကနြေပျဘဲနဲ့ ပထမအဆငျ့နဲ့ သူတို့ကို အရေးယူစခေငျြတယျ။ အဲ့လို အယူအဆတှလေညျး အမြိုးမြိုးရှိနကွေတာပေါ့ ဆန်ဒပွသမားတှထေဲမှာ။
မမွသဇငျအောငျ။ ။ ဆန်ဒပွပှဲတှကေ ဆကျပွီးတော့ ဖွဈနအေုံးမယျဆိုတဲ့ သဘောလား အနျကယျ။
ဦးကြျောဇံသာ။ ။ ဟုတျပါတယျ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ စောစောကပွောတဲ့ ဆန်ဒပွသမားတှေ လိုခငျြတာက တရားရုံးက ဘယျလိုသူတို့ကို ပွဈမှုထငျရှား စီရငျလာမလဲ။ အဲဒါ သိပျအရေးကွီးပါတယျ။ အခုက ပွညျနယျရှနေ့ခြေုပျကလညျး မနကေ့ ပွောတယျ၊ သူတို့ကတော့ ဒီကိစ်စကို ပိုပွီး စစေ့စေ့ပျစပျနဲ့ သသေခြောခြာလုပျမယျ၊ အခြိနျယူပွီးတော့ လုပျရမှာ ဖွဈတယျ။ အတတျနိုငျဆုံး မွနျအောငျ ကွိုးစားပမေဲ့လညျး လနဲ့ ခြီပွီး ကွာနိုငျတယျလို့ ပွောပါတယျ။ ဆိုတော့ အဲဒီ တရားရုံးရဲ့ အဆုံးအဖွတျ တရားရုံး ဆိုတာ ဂြူရီအဖှဲ့ပေါ့၊ ဒီကတရားဥပဒေ စနဈအရတော့ တရားရုံးကို တငျမယျ၊ တရားရုံးမှာ ကွားနာ စဈဆေးရမယျ။ ပွီးတော့မှ ဂြူရီက သူတို့ကို ပွဈမှုထငျရှားတယျလို့ ယူဆသလားဆိုတာ ဆုံးဖွတျသလား။ အဲ့ဒါထိ သူတို့စောငျ့ကွညျ့လိုတဲ့သဘောတော့ အနညျးဆုံး ရှိလိမျ့မယျလို့ ထငျပါတယျ။ ဆန်ဒပွသမားတှေ တခြို့ပွောတာက ဒီတဈမှုထဲတငျမကဘူး၊ နိုငျငံမှာ ဒါမြိုးတှေ အမွဲတမျးလိုလို မကွာခဏဖွဈနတော။ အဲ့ဒါကွောငျ့ စနဈကိုပါ သူတို့ ပွငျခငျြတယျဆိုပွီးတော့ ပွောနကွေတယျ။
မမွသဇငျအောငျ။ ။ နောကျတခုက အနျကယျ။ ဒီဆန်ဒပွပှဲတှေ နှိမျနငျးဖို့ လိုအပျရငျ စဈတပျကိုသုံးမယျလို့ သမ်မတထရမျ့က ပွောတဲ့အပျေါ ကာကှယျရေး အသိုငျးအဝိုငျးက ဝဖေနျနကွေတာတှလေညျး ရှိပါတယျ။ အဲဒါနဲ့ ပတျသကျလို့ရော အနျကယျဘယျလို သဘောရပါသလဲရှငျ့။
ဦးကြျောဇံသာ။ ။ အဲဒီကိစ်စမှာ သမ်မတ Donald Trump ဘာရညျရှယျခကျြနဲ့ လုပျသလဲဆိုတာထကျ သူလုပျလိုကျတဲ့ လုပျရပျဟာ သူ့အပျေါမှာ ပွနျပွီးတော့ ဒါ ဆိုးပွဈတှပေေါ့လေ၊ ကောငျးကြိုးမဟုတျဘဲနဲ့ မလိုလားအပျတဲ့အဖွဈတှေ တနျပွနျရိုကျခတျလာနိုငျတယျလို့ပဲ ပွောရမှာဖွဈပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လညျးဆိုတော့ သူ့ဆီမှာ အရငျတုနျးက ကာကှယျရေးဝနျကွီး လုပျခဲ့တဲ့ ပုဂ်ဂိုလျပေါ့ ဝနျကွီးဟောငျး Mattis ဟာဆိုလို့ရှိရငျ သူပွောတာ တျောတျောလေး တနျဖိုးရှိတဲ့ စကားပါ။ Donald Trump က စဈတပျကို သုံးပွီးတော့ ဒီဟာတှကေို နှိမျနငျးဖို့ ပွောလိုကျတာဟာ အမရေိကနျပွညျသူတှေ ဖှဲ့စညျးအုပျခြုပျပုံအရ ပိုငျဆိုငျခှငျ့ရှိတဲ့ အခှငျ့အရေးကို ခြိုးဖောကျခံလိုကျရတာ။ အဲဒီ အခှငျ့အရေး ကငျြ့သုံးတာကို စဈတပျက နှိမျနငျးရမယျဆိုတဲ့ သဘော၊ အဲလိုဆိုတော့ ဒါ စဈတပျနဲ့ ပွညျသူတှကေို ရနျတိုကျပေးတဲ့သဘော ဖွဈတယျဆိုပွီးတော့ ထိုးနှကျပါတယျ။
မမွသဇငျအောငျ။ ။ အမရေိကနျမှာ အခုလို လူမြိုးရေးခှဲခွားမှုနဲ့ တခွားခှဲခွားမှုတှေ အပျေါ ဆန်ဒပွကနျ့ကှကျနကွေတဲ့ ဂယကျက နိုငျငံတကာကို ဘယျလောကျ ရိုကျခတျမှု ရှိလာနိုငျပါသလဲ။ ဒီအပျေါမှာရော အနျကယျ ဘာပွောခငျြပါသလဲရှငျ့။
ဦးကြျောဇံသာ။ ။ ဟုတျကဲ့။ အခုကိုပဲ နိုငျငံတကာမှာလညျးပဲ အလားတူ ဆန်ဒပွပှဲတှေ ဖွဈနတော တှရေ့ပါတယျ။ ဟိုသမိုငျးထဲက ဆိုရိုးစကားတခု သတိရပါတယျ။ တခြိနျတုနျးက ပွငျသဈမှာ တျောလှနျရေးဖွဈရငျ ဥရောပကိုပါ ကူးစကျသှားတော့ When France sneezes, European catchesacold. ပွငျသဈက ဟတျခြိုးခရြေငျ ဥရောပက နှာစေးနပွေီ၊ အအေးမိနပွေီ ပွောကွပါတယျ။ အခု ကမ်ဘာ့နိုငျငံတှရေဲ့ အခွအေနကေလညျး When American sneezes, the World catchesacold. ပွောရလို ဖွဈနပေါပွီ။ အမရေိကနျက ဖွဈလိုကျရငျ ကမ်ဘာကို ပြံ့နှံ့သှားတာပဲ။